Accueil > Gazetin'ny nosy > Pôlitika: Iza no hisolo an-dRavalo sy Hery eto Antananarivo ?
Pôlitika: Iza no hisolo an-dRavalo sy Hery eto Antananarivo ?
Ingahy Hery Rajaonarimampianina dia filohampirenena tsy nankasitrahan’Antananarivo voalohany indrindra. Tsy mbola nahita an’i Hery Rajaonarimampianina namory vahoaka teto Antananarivo isika ka nahafeno olona teny an-kianja. Antananarivo izay toerana fandrefesana ny fitiavan’ny vahoaka voalohany eto Madagasikara. Na ny fetin’ny Fahaleovan-tena izay atao eo Mahamasina isaka ny 26 jona aza tsy mampiraika olona ny hanatrika izany. Ny farany teo iny dia nozarana vola ny vahoaka vao tonga tao Mahamasina. Hatramin’ny 10 ora maraina dia ny ampahatelon’ny kianjaben’i Mahamasina ihany no nisy olona. Ingahy Hery Rajaonarimampianina izay tsy mety mamory vahoaka eto Antananarivo mihitsy hatramin’izay nitondrany izay. Soa ihany fa nisy ny Emmo/reg izay ataony hery famoretana ka nanakana ny olona tsy afaka naneho hevitra. Hatrany amin’ny faritany dia ny mpianatra sisa no terena hitsena ity filoha ity rehefa manao fitsidiham-paritany.
Ny an’ingahy Ravalomanana Marc indray dia asesin’ny olona isaka ny mivoaka eto Antananarivo. Tsy avelan’ny olona hamory vahoaka izy ary misy andian’olona manakana azy amin’izany toa ny nitranga tany Toliara sy Taolagnaro farany teo iny. Fandroahana izao no azony amin’izany. Mbola resaka hafa koa ny fandroahana azy tamin’ny hôtely tany Antsiranana tamin’ny fivoriana nataon’ny FJKM (Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara). Na eto Anatananarivo dia efa tsy mahasarika olona intsony ingahy Ravalomanana Marc. Raha izao fahoriam-bahoaka mitranga izao dia tokony hihetsika ity filoham-pirenena mirehareha fa mahazaka an’Antananarivo ity. Tsy misy olona toa ny taloha intsony manaraka azy fa ireo izay naira-dia taminy tsy mahita làlan-kaleha intsony sisa momba azy. Manampy trotraka ny tsy fitiavan’ny olona azy koa ankehitriny ny ataon’ny antoko TIM (Tiako i Madagasikara) amin’ny fitantanan’i Lalao Ravalomanana ny tanànan’Antananarivo. Fanenjehana olona sahirana, fanorenana trano amin’ny toerana tsy tokony hanaovana izany mba hahazoana vola kely. Tsy misy zavatra vitany intsony raha tsy ny manenjika ny mpivarotra sy ny olona sahirana, fandravana tranon’olona.
Ny zava-misy nefa dia miezaka mafy izy roalahy ireto mandresy lahatra ny Malagasy amin’izao fotoana izao mba hirona bebe kokoa any aminy. Tsy vitan’izany fa mifampiampanga amin’ny vahoaka fa tsy mandeha ny raharaham-pirenena. Izy roa nefa no mitantana an’Antananarivo renivohitr’i Madagasikara. Ny iray mpanolotsaina manokan’ny vadiny izay mitantana an’Antananarivo moa ny iray filohan’i Madagasikara izay latsaka amin’ny kizon’ny fahantrana.